Noocyada spurs iyo sida loogu isticmaalo fardo | Fardaha Noti
Noocyada spurs iyo sida loogu isticmaalo fardo
Jenny monge | | Qalabka fardaha, Fardo
Spurs waa aalad loo adeegsan karo ficil ahaan dhamaan qeybaha kala duwan ee fardaha. Waxay yihiin nooc ka mid ah cirbadaha birta ah ee lagu dhejiyo cidhibta kabaha fuushan si ay kaaga caawiso inaad jihada dhaqdhaqaaqa faraska.
Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado sida iyo goorta loo adeegsado ka fogow xadgudubka iyaga iyo fardaha waxyeeli kara. Tan awgeed waxaa jira xeerar qaar qaab ahaan iyo isticmaal ahaanba.
Ma arki karnaa noocyada spurs ee jira iyo sida loo isticmaalo?
Waxaan u arkaa inay xiiso ii tahay inaan furo maqaalkan anigoo ka hadlaya haddii spurs waa ama aan loo baahnayn. Fikradeyda jawaabtu waa maya waxay yihiin. Hadday run tahay taas iyaga oo si sax ah u adeegsada waxay noqon karaan aalad u sahlaysa fuulitaanka shaqada waxayna wanaajin karaan la xiriirka faraska.
Waa inaad noqotaa mid aad u cad in kicinta yaanay waxyeelayn xayawaankeena, ma aha nooc ciqaabeed sidaa darteedna waa in loo adeegsadaa si taxaddar leh. Dhaqdhaqaaq toosan iyo mid qarsoon waa in la sameeyaa si aan faraska loo laadin.
1 Qaybo ka mid ah majaajillada
2 Nooca spurs
2.2 Spur dubbe
2.3 Kubbadda cagta
3 Noocyada diiga iyo isticmaalka
3.1 Diiqa gaaban
3.2 Diiwaanka Dhexe
3.3 Diiqa Dheer
4 Isticmaalka spurs
4.1 Sidee loo adeegsadaa?
Qaybo ka mid ah majaajillada
Waxay ka kooban yihiin 6 cunsur. A arco, sidoo kale loo yaqaan jirka, taas oo ah qaybta qaloocsan ee ku habboon ciribta ciribta kabtanka. Ku lugaha, kuwaas oo ah qaybaha hoos u dhacaya dhinacyada kabaha. Ku leash, taas oo ah suunka xajiya kicinta cagaha fuushan. Ku god badhan kaas oo ku biiraya suunka iyo qaansada. Ku jeex ama roulette taas oo ah waxa aad faraska ku taabatid si uu ugu kiciyo. Ugu dambayntiina diiq, pigüelo ama pihuelo, taas oo ah qaybta loo yaqaan 'roulette' lagu qabto, ha wareejiso ama ha wareejiso.
Markaad dooranayso xawaare, waxaa aad muhiim u ah in la ogaado farqiga u dhexeeya kuwa leh giraangiraha wareega iyo kuwa aan lahayn. Waxaan ku talinayaa kuwa ugu horeeya tan iyo roulette wareegaya, ayaa ka celinaya inuu riixo maqaarka faraska oo uu daadiyo, kana dhigo mid ka jilicsan midka aan wareegin halkaas oo aan ku waxyeelayn karno xayawaankeenna si ka fudud kuwa kuwa wareegaya.
Waxaan ka heli karnaa noocyo kala geddisan:
Ka sameysan bir bir ah oo leh cabbirro kala duwan iyadoo kuxiran dhererka diiqii. Madaxa waa leylal leh oo siman, geesaha wareegsan. Waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan oo Ingiriis ah:
Ingiriisiga kubbada: kubaddu way rogi kartaa
Ingiriisi ku riixdo roulette: Way ka sii dhumuc weyn tahay oo ka sii adag tahay, oo lagu dhammeeyey giraangiraha lagu xidho shaagagga wareegga leh.
Ingiriisiga xiddigta leh: Waa midka uu giraangiraha ilkuhu leeyihiin ilko halkii uu ka fiicnaan lahaa.
Ka samaysan bir bir ah ama caag. Diiqdu badanaa waa qiyaastii 20 mm. Madaxu waa siman yahay oo waa leydi.
Ka sameysan nikkel leh kubbad qaabeysan.
Noocyada diiga iyo isticmaalka
Diiqii noqon karaa mid toosan ama qaloocsan, taasi waa, waxay u tilmaami karaan hoos ama xagga faraska. Taas ka sokow, iyadoo loo eegayo dhererkeeda iyo isticmaalkeeda waxaan helnaa saddex nooc:
Waa nooc ka mid ah diiqii loo adeegsaday edbinta fardaha ee boodboodka showga. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in jirka fuulitaanka uu aad ugu dhow yahay kan faraska sidaas darteedna diiqu waa inuu gaabnaadaa (15 mm) si uu ugu fiicnaado labada fuushan iyo xayawaanka.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo faraska waxyar ka hor boodka.
Waa kan sida caadiga ah loo isticmaalo hab guud. Dhererkiisu waa 20mm wuxuuna ku habboon yahay qof kasta oo dhererkiisu dhexdhexaad yahay.
Waa la isticmaalay labiska, gaar ahaan kuwa aadka u dheer. Waxay qiyaastaa 30 mm.
Spurs waa in la habeeyo si fiican loogu dhejiyay ciribta bootka fuula. Waa inay xiriir buuxa la yeeshaan ciribta adigoon tuujin laakiin aan dhaqaaqin. Fikrad ahaan, waa inay ku ekaadaan cirifka ciribta, iyadoo kuxiran nooca bootka cad. Oo kala saar midka lug kasta, midig iyo bidix ku socda.
Waa muhiim in la ogaado sida si wanaagsan loogu hagaajiyo xargaha oo loo doorto cabbirka saxda ah. Waxaan ka heli karnaa cabbirro loogu talagalay carruurta, dhallinyarada, haweenka iyo ragga. Laakiin tani micnaheedu maahan in kabaha haweenka ay yihiin kuwa sifiican ula jaan qaada kabaha gabadha. Waxay kuxirantahay halka aan dhigeyno, dhererka kicinta iyo dhadhankeena. Ujeeddadu waa in lala tashado khabiirada dukaanka kuwaas oo kiciya cabirka kugu habboon adiga.
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, dhiiri gelinta waxaa loo isticmaali karaa ficil kasta oo anshax fardooley ah. Si aad ugu isticmaasho faraskayaga, waa inaan si kooban oo sax ah u siino taabashada xoolaha. Taabashadan ayaan ku siin doonaa ciribta si aan u kordhinno xawaaraha, u jeesanno ama horay ugu soconno.
Isticmaal wanaagsan oo ku saabsan dhiiri gelinta, iyadoo laga warqabo waqti kasta xaaladdeena maskaxeed (maadaama hadaan xanaaqno ama jahwareerno ay noo horseedi karto inaan si xun u isticmaalno) dhaqdhaqaaqyada aan samaynana waxay noqon karaan hab aan kula xiriirno xayawaankeenna. Hab lagula xiriiro oo jawaab looga helo faraska si wax ku ool ah. Maaha in wax la yeelo, waa in la wanaajiyo awooddeena fardooley. Si kastaba ha noqotee, waxaan xusuusan nahay in isticmaalkeedu uusan daruuri u ahayn raacitaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Noocyada spurs iyo sida loogu isticmaalo fardo
Xiriirka Isboortiga Isbaanishka: Asalka iyo Waxqabadyada